बिचार गर्नुहोस, कतै तपाईं पार्टनरको ‘एब्युसिव रिलेशनशिप’को शिकार हुनुभएको त छैन ? - हातेमालो डेली
बिचार गर्नुहोस, कतै तपाईं पार्टनरको ‘एब्युसिव रिलेशनशिप’को शिकार हुनुभएको त छैन ?
बदलिदैँ गएको समाजको रहनसहन र दैनिकीले आजभोलि हरेक सम्बन्धमा केही न केही समस्या पैदा हुन थालेका छन् । सामान्य कुरामा हुने झै–झगडा र विवाद आजभोलि सामान्य नै भइसकेको छ तर तपाईंको पार्टनर सधैँ त्यही कुरा गर्छ जसले तपाईंको सम्बन्धमा मनमुटाब गराउँछ । यसलाई ‘इमोशनल अत्याचार’ पनि भन्ने गरिन्छ । भावनात्मक रुपमा चोट पुग्दापुग्दै कतिवेला त्यो सम्बन्ध ‘एब्यूसिव रिलेशनशिप’ मा बदलिसकेको हुन्छ कसैलाई थाहा नै हुँदैन ।
Previous articleनेपाली युवा दिवेश पुगे अमेरिकन आइडलको फाइनलमा
Next articleतुरुन्तै प्रयोग गर्नुहोस, खोकीको उपचारको लागी १० घरेलु उपाए